Madaxwaynaha DDSI Oo Maanta Socdaalkiisii Kormeerka Ku Gaadhay Degmada Feyrfeer Ee Gobolkaasi Shabeele. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Maanta Socdaalkiisii Kormeerka Ku Gaadhay Degmada Feyrfeer Ee Gobolkaasi Shabeele.
Feyrfeyr(CN) Sabti.Dec.20.2014, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafti kuwehelinaysay ayaa toddobaadkan kormeer hawleed oo taabanaya dhinacyo badan kumaraya deegaano iyo goobo badan oo katirsan gobolada deegaanka.
Iyadoo uu waftigan uu madaxwaynuhu horkacayo soo maray shalayto goobta Kaaluub islamarkaana kulan wadatashi ah kulayeeshay odoyaasha iyo waxgaradka labada dhinac ee degmooyinka Shilaabo iyo Dhoobo-wayn ayuu waftigu shalay galab soo gaadhay xarunta gobolka Shabeele ee caasimada Godey.
Waxaana magaalooyinka iyo tuulooyinka muuqanaya qaybaha kala duwan ee shacabka oo wadooyinka camiraya si ay usoo dhaweeyaan madaxwanaha iyo waftigan.
Madaxwayanaha oo kulamo iyo wax iswaydiin dhinaca horumarka ah layeeshay waxgaradaka, maamulka iyo qaybaha kala duwan ee gobolka ayaa saaka Helikobter kaga anbabaxay magaalada Godey dhinaca degmada Feerfeer ee gobolka Shabeele.
Wuxuuna madaxwaynuhu kulan balaadhan kulayeeshay hogaamin dhaqameedka iyo salaadiinta degmada Feyfeer, halkaas oo aad looga wada hadlay caqabada iyo sidoo kale guulaha kajira degmada ee dhinaca horumarka,
nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Mar wax la iska waydiinayay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ayuu madaxwaynuhu sheegay in ay qorshe ahaan mida koobaad ay tahay wadada Godey ilaa Ferfeer oo ah mida ugu muhiimsan ee ay xukuumadu ahmiyada siinayso qorshe ahaan.
Kulankan ayay waxgaradka degmadu uga mahadceliyeen xukuumada dhinacyo badan iyagoo sidoo kalena soo jeedinayay meelaha u daran ee degmada Fefer. Waxaana la isla qaatay fahan buuxa oo dardar galin doona hawlaha horumarka iyo nabadgalyada ee degmadaasi Feerfeer.
Socdaalkan Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo taabanaya dhinacyo badan ayuu madaxwaynuhu halbeeg qoto dheer saarayaa heerka mashaariicaha, baahida horumarka iyo sida ay u kala daran yihiin, iyadoo ay madaxwaynaha kawada hadlayaan cuqaasha iyo wax garadka deegaanada uu marayo. Sidoo kale waxaa iyaguna wax laga waydiinayaa maamulada u xilsaaran shaqooyinka iyo hawlahaasi horumarineed.
Madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa caawa oo ah habeenkii labaad kusugan magaalada Godey ee xarunta Gobolkaasi Shabeele. Waxaana lafilayaa in uu waftigu kormeerkan ku gaadho goobo kale oo deegaanka kamida.